I-11 yeeScholarship eziPhezulu zeZifo eziZenzekelayo 2022
Kukho izibonelelo zokufunda ngezifo ezizimele geqe, oko kukuthi, abantu abanesifo sokuzimela okanye esinye kodwa abafuna ukuqhubeka nemfundo ephezulu banikwa izibonelelo zokubakhuthaza nokubanceda bahlawule imali yokufunda.
Uninzi lwabantu luphila ngokugula, ukukhubazeka, ukuphazamiseka, njalo njalo kwaye ezi zigulo zibenze ubomi babo bahluka kubantu abaqhelekileyo. Ngenxa yezi zigulo, banikwe umda ekwenzeni izinto ezininzi ezinokwenziwa ngabanye, ubomi, ngokubanzi, abulula kubo.
Kwilinge lokwenza izinto kube lula kakhulu kubantu abaphila nokugula okanye ukukhubazeka, iziseko zesisa, imibutho, njalo njalo zisetelwe ukubanceda nokubakhuthaza nangayiphi na indlela abanokuthi benze ngayo.
Oku kubandakanya uncedo lwezemali olunokuthi lube luhlobo lweengxowa-mali zokubanceda bafezekise iinjongo zabo zemfundo kunye nenkxaso yokuziphatha ukuze bakwazi ukuqhubeka nobomi.
Ewe abantu abaninzi abaphethwe sisifo esinye, ukuphazamiseka, okanye ukukhubazeka baneenjongo zomsebenzi ezinokufikelelwa ngokuya kwiziko eliphakamileyo njengeyunivesithi, ikholeji, urhwebo, okanye izikolo zoqeqesho. Aba bantu bakhethekileyo ke banemifundaze eyilelwe ngokukodwa ukuba ibabone ngokulandela imfundo.
Ngelixa ezinye izifundiswa zezabantu abagulayo ngokubanzi, oko kukuthi, abantu abaphila nokukhubazeka, ukuphazamiseka, okanye izifo ezinganyangekiyo, ezinye zijolise kubantu abanengxaki ethile yempilo. Ezifana nezifundo zokufunda izifo ezizimele, izifundiswa zesifo esinganyangekiyo, izifundiswa zemfama, ukufundela i-autism, njalo njalo
Eli nqaku, nangona kunjalo, libonelela ngeenkcukacha zokufunda ngezifo ezizimeleyo, oko kukuthi, kuphela ngabantu abaphila nayo nayiphi na imeko yempilo yomzimba abanokufaka izicelo zezifundo ezibhalwe apha.
Ziziphi izifo ezizimele?
Izifo ezisebenza ngokuzenzekelayo zizifo apho amajoni omzimba ahlasela iiseli ezisempilweni. Iindidi eziqhelekileyo zezifo ezizimeleyo zezi:
Uhlobo lwe-1 sikashukela
Ezi zizifo ezizimeleyo kwaye ukuba, ngelishwa, kwenzeka ukuba ukhathazwe sesinye sezifo ezidweliswe apha unokukwazi ukulungela isifundi esinokukubona kwiziko eliphezulu.
Ngaphandle kokuba nesifo esizimele, kukho iimfuno ezizodwa kunye neendlela zokufaneleka ekufuneka uhlangane nazo ukuze unikwe isifundi. Ngasinye yezifundo zezifo ezizimeleyo zineemfuno ezithile ekufuneka uhlangane nazo ukuze ufumane ibhaso.
Ngaphandle kokuqhubeka kokuqhubeka, masiqhubeke sifunde ngezi zifundo zezifo ezizimeleyo kunye nokuba kuthatha ntoni ukuzifumana.
1 Ziziphi izifo ezizimele?
2 Izifundo eziPhezulu zeZifo eziZenzekelayo
2.1 Ilifa lika-Anthony loLuthando (BONKE) iSiseko
2.1.1 Ubunkokeli boLuntu obuBalaseleyo
2.1.2 Iimfazwe ezizimeleyo "Unayo le" I-Award Award
2.2 UAnderson kunye noStowell Scholarship
2.3 IMicrosoft disAbility Scholarship
2.4 Esi sisiseko seSiseko seScholarship
2.5 INgxowa-mali yeLifeLife Foundation RAREis Scholarship Fund
2.6 IHannah Bernard Memorial Scholarship
2.7 Ingxowa-mali ka-Elaine Chapin
2.8 Isifundo seBuckfire Law Scholarship
2.9 I-NBCUniversal Tony Coelho Media Scholarship
2.11 I ngcebiso
Izifundo eziPhezulu zeZifo eziZenzekelayo
Apha ngezantsi kukho izifundiswa zezifo ezisebenza gwenxa:
Ilifa lika-Anthony loLuthando (BONKE) iSiseko
Ubunkokeli boLuntu obuBalaseleyo
Iimfazwe ezizimeleyo "Unayo le" I-Award Award
UAnderson kunye noStowell Scholarship
IMicrosoft disAbility Scholarship
Esi sisiseko seSiseko seScholarship
INgxowa-mali yeLifeLife Foundation RAREis Scholarship Fund
IHannah Bernard Memorial Scholarship
Ingxowa-mali ka-Elaine Chapin
Isifundo seBuckfire Law Scholarship
I-NBCUniversal Tony Coelho Media Scholarship
SONKE isiseko ngumbutho ongenzi nzuzo osekwe kwi-2018 ukunceda abantu abaphethwe sisifo sokuzimela. Ukusukela ekusekweni kwayo kwi-2018, umbutho ubonelele nge-18,200 yeedola kwimali yokufunda kubafundi beekholeji abanesifo sokuzimela.
ZONKE iziseko zibonelela ngezifundo minyaka le kwaye kube kanye zibonelela ngezifundo ezibini zezifo ezizimele kulo nyaka. Iingcali zezi:
Le yenye yezifundo zezifo ezizimeleyo ezibonelelwa sisiseko SONKE, yi- $ 2,000 ibhaso eyilelwe ukubonelela ngenkxaso yemali kubafundi abaphethwe sisifo esizimeleyo kodwa usafuna ukuqhubekeka nemfundo yabo.
Ukufumana eli bhaso, kuya kufuneka ubhalise kwiyunivesithi eyamkelweyo elandela inkqubo yesidanga sokuqala, sebenza kwindawo ohlala kuyo, ube nokuma okuphezulu kwezemfundo, kwaye ugcine i-GPA ye-3.0 okanye ngaphezulu.
Ukongeza, uza kubhala isincoko malunga neenjongo zakho zexesha elizayo, iinkonzo ozenzileyo ecaweni yakho okanye ekuhlaleni, kunye nendlela ukufumana isibonelelo ekuza kukunceda ngayo. Kwaye okokugqibela, ngenisa ingxelo yakho yamva nje.
Umhla wokugqibela wesicelo ngu-Apreli 30, 2021
Le yenye yezifundo zokuba izifo ezizimeleyo zikwabonelelwa sisiseko SONKE sokunceda abantu abaxhwalekileyo ukuba babe nesifo esizimele ukuba bafumane imfundo abayifunayo ukufezekisa iinjongo zabo zomsebenzi.
Ukufaka isicelo sale bhasari, kuya kufuneka ubhalise kwisidanga sokuqala okanye isidanga sokuqala kwikholeji yeminyaka emibini okanye emine okanye eyunivesithi eUnited States nge-GPA encinci ye-3.0. Ukubandakanyeka koluntu kunye nokusebenza ngamandla kwezemfundo nazo ziyafuneka iikhrayitheriya zokuphumelela le mfundo.
I-Anderson kunye ne-Stowell Scholarship ibonelelwa ngu-Bella Soul, umbutho wesisa kawonkewonke osekwe ekuxhobiseni abafundi abanesifo se-autoimmune, ukukhubazeka komzimba, ukuphazamiseka, njlnjl.
Le ngxowa-mali iyinto eqhelekileyo yabantu abagulayo kunye nokupasa kakuhle kwesinye sezifundo zezifo ezizimele. Abafakizicelo kufuneka babhalise ngokusisigxina okanye kwinkqubo yexeshana kwikholeji eyamkelweyo kwaye bangabikho kuvavanyo lwezifundo.
Ukongeza, abafaki-zicelo kufuneka babhale iphepha elinamaphepha amabini elinamacala amabini malunga namahla ndinyuka okuphila nesifo esibuhlungu.
Kwisincoko sakho, faka iimpendulo zale mibuzo ilandelayo: “Ungamcebisa uthini umntu onengxaki yokugula okanye ingxaki efanayo? “Zeziphi ezinye iindlela ezikunceda ukuba uqhubele phambili kwaye uphile ubomi obunempilo ngokwasemzimbeni nangokomzimba?
Ukufaka isicelo, ubungqina be-imeyile bokubhalisa kwi-Bella Soul, ingxelo ayifuneki nokuba yi-GPA kodwa iya kuthathelwa ingqalelo. Gcwalisa igama lakho, unyaka, i-GPA, iyunivesithi, kunye nezifo / ukuphazamiseka kunye ne-imeyile sstrader@wisc.edu.
Isixa semali yokufunda yi- $ 400 ngomhla wokugqibela ka-Agasti 30, 2021.
Kuyabonakala ukuba, ezinye izifo ezizimeleyo zibangela ukukhubazeka, kwaye ukuba ufunyaniswe unenye kwaye usafuna ukuqhubekeka nemfundo yakho kwiziko eliphezulu ungasifaka isicelo sale mali yokufunda.
IMicrosoft-inkampani enkulu yetekhnoloji-yenza le mfundo yokuxhobisa nokwenza abantu abakhubazekileyo ababangelwe zizifo ezizimele. Oku kwenza iMicrosoft disAbility Scholarship phakathi kokufunda ngezifo ezizimele kwaye inexabiso le- $ 5,000.
Isibonelelo semali esiyi- $ 5,000 sinikezelwa minyaka le kwaye ukuba umamkeli ugcina imeko elungileyo yokufunda inokuphinda ihlaziywe iminyaka emithathu eyongezelelweyo. Ke, isifundi sinokubakho kwi-20,000 yeedola.
I-scholarship inikezelwa kumfundi wesikolo esiphakamileyo kwiminyaka yabo yokugqibela yokukhubazeka okubangelwa zizifo ezizimele. Umenzi-sicelo kufuneka ukuba ufake isicelo okanye malunga nokufaka isicelo kwiziko eliphakamileyo eligunyazisiweyo ukuze enze ikhondo lobuchwephesha.
Ukongeza, umfaki-sicelo kufuneka abe ne-CGPA ubuncinci be-3.0 okanye ngaphezulu, abonise ubunkokeli kunye neemfuno zezemali. Amanye amaxwebhu afunekayo kwisicelo zizincoko ezintathu, i-resume, ingxelo ebhaliweyo, kunye neeleta ezimbini zokucebisa.
Le yenye yezifundo zokufumana izifo ezizimeleyo ezenzelwe abafundi ngoku abanengxaki yokufumana okanye ababefumene kwakhona kwiAlopecia. Abafakizicelo kufuneka babe kwisikolo samabanga aphakamileyo kwiminyaka yabo yokugqibela ngexesha lesicelo esijolise ekuqhubekeni nemfundo yabo kwiziko eliphakamileyo eligunyazisiweyo eMelika.
Ukongeza, abafaki-zicelo kufuneka bangenise oku kulandelayo njengenxalenye yesicelo sokufunda:
Isiteyitimenti esichaza amava akho ngokuba nealopecia (akukho magama aphezulu okanye ubuncinci obufunekayo).
Ukuqala kwakhona kobomi bakho / isikolo kunye namava omsebenzi
Ileta yengcebiso evela esikolweni, emsebenzini, okanye kubaxhasi boluntu
Ileta yokwamkelwa kwiziko eliphezulu
I-EveryLife Foundation yenzelwe ukunceda abantu abanesifo esinqabileyo ngokuxhasa iinjongo zabo zomsebenzi ngokubanika izibonelelo zokufunda.
Kutheni le nto iphakathi koluhlu lwezifundo zezifo ezizimele?
Ewe, ezinye izifo ezizimeleyo ziphakathi kwezinye izifo ezinqabileyo ezifana nohlobo 1 lweswekile. Kuya kufuneka wenze olwakho uphando ngezifo ezinqabileyo ezenzekelayo kwaye ukuba isifo sakho siwela phakathi kwabo, unokuqhubeka nokufaka isicelo sobufundi.
Abafakizicelo kufuneka babe ngaphezulu kweminyaka eli-17 ubudala, bahlala eUnited States, kwaye bafumane isifo esinqabileyo kudidi lwezifo ezizimele. Iingxowa-mali zinikezelwa rhoqo ngonyaka kwaye zixabiswa kwi- $ 5,000 nganye kubamkeli be-35.
Abafakizicelo kufuneka bacwangcise ukubhalisa okanye sele bebhalisile kwiziko eliphakamileyo eqinisekisiweyo eMelika ukuze baqhubeke nesidanga sokuqala okanye inkqubo yokuthweswa isidanga. Amaziko emfundo abandakanya iiyunivesithi, iikholeji, kunye nezikolo zomsebenzi okanye ezorhwebo.
Ezinye iimfuno ezongezelelweyo zibandakanya ukubhalwa kwamanqaku okwangoku kunye nokuxilongwa kwesifo sakho esinqabileyo somzimba, isicatshulwa esichaza iinjongo zakho kunye nendlela ukufumana i-scholarship kuya kukunceda ufezekise.
Ukufundiswa kwezifundo kunikezelwa ngokusekwe kwizincoko, ubuchule bobunkokeli, ukubandakanyeka kwimisebenzi yesikolo kunye noluntu, amava omsebenzi, ukusebenza kwezemfundo kunye neemfuno zemali.
I-Hannah Bernard Memorial Scholarship sisibonelelo sokufunda sabafundi abanengxaki yeemeko ezinzima ezifana ne-Myositis kunye naso nasiphi na esinye isifo sokuzimela geqe esidweliswe njengemeko yentlungu.
Kuyabonakala ukuba, ezinye izifo ezizimeleyo nazo zinemeko yeentlungu kwaye ukuba unesifo sokuzimela komzimba esiwela kweli nqanaba ke kuya kufuneka ufake isicelo sale mali yokufunda.
Wazi njani ukuba imeko yakho yempilo yomzimba ewela phakathi kweemeko ezinzima?
Kulula ke oko. Ungabuza ugqirha wakho okanye wenze uphando lwakho, uGoogle uhlala ekulungele.
Ke, ukuba uwela phakathi kodidi kwaye ujonge ukulandela imfundo kwisikolo esiphakamileyo, ekholejini, eyunivesithi, okanye ukufunda kwi-Intanethi ungafaka isicelo sale $ 600 yokufunda.
Kufuneka ugcwalise isicelo kunye nezincoko zamagama angama-500 okanye ungazichazi kangako nendlela ophila ngayo obona bomi bumnandi ngaphandle kokubandezeleka okungapheliyo kunye nendlela ukufumana le mfundo kuya kukunceda ufezekise iinjongo zakho zemfundo.
Ke ngoko uHannah Bernard Memorial Scholarship udlula njengenye yezifundo zezifo ezisebenza gwenxa.
Ingxowa-mali ka-Elaine Chapin yasekwa ukuze ibonelele ngemali yokuxhasa imfundo ephezulu yabafundi abachatshazelwe sisifo sokuqina kwamathambo, ngokuthe ngqo okanye njengelungu losapho. Abahlali kuphela baseSaint Louis kunye nommandla waseMissouri eUnited States bavulekile ukuba bafake izicelo zale mfundo.
Abafaki-sicelo kufuneka babhalise okanye baceba ukubhalisa kwiziko eliphakamileyo e-United States, abafumanayo bayathathwa ngokusekwe kwiimfuno zemali, ukusebenza kwezifundo, kunye nokuba isifo sokuqina kwamathambo sichaphazele njani ubomi babo.
Kuba i-multiple sclerosis yimeko yempilo yokuzimela, u-Elaine Chapin Fund uqinisekile ukuba udlula kwesinye sezifundo zezifo ezisebenza ngokuzimela.
Esi sisibonelelo sokufunda esijolise kubantu abaphila nokukhubazeka, ukungahambi kakuhle, ukugula okungapheliyo, kunye nazo zonke iintlobo zeemeko zempilo ezizimeleyo. I-Buckfire Law Scholarship yenye yezifundo zezifo ezizimeleyo njengoko inceda ukubonelela ngoncedo lwezezimali kubantu abanengxaki yemicimbi yezempilo kwaye bafuna ukuqhubela phambili imfundo yabo kwiziko eliphezulu.
Isifundi ibhaso le- $ 1,000 kwaye ukuliphumelela kuya kufuneka uhlangabeze ezi mfuno zilandelayo:
Kufuneka ube ngummi okanye umhlali osisigxina e-United States kwaye ubhalise kwiziko elisemthethweni lase-US
Unesiphene okanye isifo esivela kugqirha ofanelekileyo.
Ugqibe ubuncinci isemester enye kwiziko lakho lokubamba.
Ebizwa emva kukaTony Coelho-owayesakuba ngummeli wase-United States- kwaye eyilelwe ukubonelela ngezifundo kubantu abaphethwe yimicimbi yezempilo.
I-scholarship inikezelwa kubafundi abasi-XNUMX abagqwesileyo kunye nabafundi abaphumelele kwiikholeji okanye kwiyunivesithi ukuba baqhubeke nomsebenzi wezonxibelelwano, abeendaba okanye ezolonwabo.
Umfundi ngamnye uya kufumana isamba esipheleleyo se- $ 5,625 ukunceda ekuhlawuleni iindleko zemfundo kwiziko labo lasesekondari.
Unomdla wokufaka isicelo? Dibana nezi mfuno zilandelayo zokufaneleka:
Abafakizicelo kufuneka babhalise njengabafundi abenza isidanga sokuqala okanye abafundi abaphumelele eyunivesithi eyamkelweyo okanye kwikholeji eMelika ngesiqingatha sokuwa sonyaka wesicelo.
Kuya kufuneka uchonge umntu onesifo esingazenzisiyo
Kuya kufuneka uthathe umdla wokulandela isidanga kunxibelelwano, kwimidiya, okanye kumzi mveliso wokuzonwabisa. Zonke izidanga zamkelekile ukufaka isicelo.
Ngelixa kungafuneki ukuba ube ungummi wase-US ukuze ufanelekele esi sibonelelo, kuya kufuneka ubhalise kwikholeji okanye eyunivesithi e-United States.
Khumbula, le ngxowa-mali ibonelelwa minyaka le kwaye ukuba awukwazi ukudibana okanye awuzange uphumelele kulo nyaka ungasoloko ujonga kunyaka olandelayo kwaye ufake isicelo.
Amanye amaxwebhu esicelo se-Intanethi se-NBCUniversal Tony Coelho Media Scholarship yimibuzo emithathu yesincoko, i-resume, iirekhodi ezingekho semthethweni, kunye neleta yengcebiso.
Oku kuzisa isiphelo semali yokufunda yezifo ezizimela kunye neenkcukacha ngendlela onokuthi ufake isicelo sazo. Faka isicelo sokufunda kwangoko ukuze uhlangane nomhla obekiweyo kwaye unokufaka isicelo esingaphezulu kwesinye ukuze wandise amathuba akho.
Ukuqhubeka nokwandisa amathuba akho, unokufaka isicelo semfundo yesiqhelo ngakumbi uhlobo oluxhaswe ngokupheleleyo ngemali ezinkozo kwimali yokufunda enkulu. Nangona izifundiswa ngokubanzi zineemfuno eziphakamileyo kakhulu ukuba unako ukuhlangabezana nazo uze uye.
Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo IYunivesithi yaseYurophu Scholarships epheleleyo Ukufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship
izifundiswa zezifo ezisebenza ngokuzimela
Post Previous:Iikhosi ezili-13 zasimahla ezikwi-Intanethi zeNdawo ethengisa izindlu kunye neziQinisekiso
Okulandelayo Post:I-10 eziphezulu kakhulu kwiIyunivesithi e-Australia kunye neMali yabo yokuFundisa
Pingback: Izikolo ezili-10 eziGqwesileyo zeDown Syndrome eFlorida ngo-2021